Sayniska Codka Inbadan | Martech Zone
Markaad raadineyso inaad la shaqeyso a cod dhaaf fanaanka fariintaada hakinta, video sharaxe, ganacsi ama wax kasta oo u baahan sheekeeye khibrad leh, waxaa muhiim ah in la xusho qof leh hibada saxda ah ee baahiyahaaga gaarka ah. Cod xirfadle ah ayaa ka badan oo kaliya qof ku hadlaya ereyada qaarkood, ka dib, adigu taas waad sameyn kartaa adigu! Adeegsiga cod khibrad iyo xirfad leh farshaxanka ayaa lagama maarmaan u ah gudbinta fariintaada sida saxda ah.
Habka ugu fiican, feker ahaanteyda, si loo helo codkaas kaamil ka ah farshaxanka waa iyada oo loo marayo Google wanaagsan oo duug ah - ama hadba mashiinka raadinta aad isticmaasho! Xirfadlayaasha badankood waxay leeyihiin istuudiyo u gaar ah, kuma koobna inaad cod ka hesho farshaxanka aaggaaga, sidaas darteed waad raadin kartaa illaa aad ka heshid mid ku habboon astaantaada. Markii aad go'aankaas gareyso, codka websaydhka farshaxanku wuxuu ku siiyaa macluumaad fara badan oo kaa caawiya, laga bilaabo markhaatiyaal ilaa shaybaarro shaqadooda ah. Haddii aysan haysan wax shaybaarro ah oo si sax ah ugu habboon waxa aad raadineyso, ha ka baqin inaad la xiriirto oo aad weydiisatid muunad qaas ah oo fikrad kaa siisa haddii ay iyagu ku habboon yihiin. Farshaxanada badankood xitaa way ku farxi doonaan inay dhageystaan ​​qeyb ka mid ah qoraalkaaga dhabta ah!
Sida cinwaanka qoraalkani muujiyey, sidoo kalena ay jirto farshaxan a cod xirfad leh, sidoo kale waxaa jira saynis iyada ah, halkaasna waa halka xirfadle run ah uu runti ka dhigayo qoraalkaaga inuu iftiimiyo.
Codka Cad Cad
Helitaanka qaafiyadda, Kordhinta qaafiyadda iyo dhicitaanka hadalka, marka la eego codka kor ku xusan waa wax aad u adag in lagu gaaro akhriska qoraalka, haddii qofka wax akhriyaa uusan xirfadle ahayn. In kasta oo aynu wada leenahay aragti dabiici ah oo qulqulaysa intaan si wada hadal ah u wada hadlayno, qoraal hor dhig dad badan ereyada ayaa noqda kuwo qallafsan oo aan la hubin.
Codka guuleysta wuxuu ubaahanyahay inuu dhawaq dabiici ah isla mar ahaantaana ilaaliyo dhererka qoraalka. In kasta oo dadka badankood ay ku deg degi doonaan qoraalka ama ay dhaleeceynayaan ereyadooda, codka xirfadlaha ah ee farshaxanka leh wuxuu leeyahay khibrad iyo xirfado loo baahan yahay in lagu habeeyo laxanka khudbaddooda si ay ugu habboonaan waqtiga la siiyay.
The codka codka loo adeegsaday cod kabadan waa inuu sifiican iskuwaafajiyaa astaanta, sheyga iyo qoraalka, iyo tan ugu muhiimsan, iskuwaacida habka dhawaaqa dabiiciga ah. Hadday halis tahay oo deggan tahay farriinta haynta ee xarunta caafimaadka, sheekaysiga iyo wiilka / gabadha deriska la ah fiidiyaha sharraxa ganacsiga, xoog leh oo feejignaan u leh ganacsiga iibinta baabuurta, ama mid ka mid ah codadka kale ee aan la tirin karin, waxay u baahan tahay lagu xakameynayo inta lagu jiro waxqabadka, taas oo aan had iyo jeer fududeyn.
Codka codka ayaa qayb weyn ka ah u muujinta ganacsigaaga iyo wax soo saarkaaga ama adeegyada aad u fidiso macaamiishaada iyo macaamiishaada mustaqbalka, khaladkaas inaad hesho, oo waxay u huwan kartaa masiibo. Tusaale ahaan, haddii aad soo saareyso hage nasasho oo codkaaga korkiisa uu yahay mid iib ah oo xoog badan, waxaa laga yaabaa inaadan helin ganacsi badan oo soo noqnoqda!
Inkastoo mugga waa wax dabcan, lagu hagaajin karo wax soo saarka kadib, wali waa wax ay tahay inay ugu dhawaato sida ugu macquulsan ee kaamilan inta lagu gudajiro duubista codka. Codku wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mid aad u sarreeya oo eray walba iyo nuur kasta lagu soo qaado mikrofoonka, laakiin ma ahan mid aad u sarreeya oo qof kasta oo ka shaqeynaya alaabooyinka la dhammeeyay ayaa loo garaacaa durbaanka dhagaha! Sidoo kale waa inay noqotaa mid isdaba-joog ah inta lagu gudajiro, iyadoo si dabiici ah looga dhawaajinayo. In kasta oo ay tijaabin karto dad badan inay adeegsadaan koror mug leh si ay u xoojiyaan erey ama oraah, codka hibada leh ee xirfadleyda ah ayaa ogaan doona sida loo adeegsado dhinacyada kala duwan ee codkooda, sida cadowga ama codka, si isla wax loo sameeyo. Shayga la dhammeeyay kama muuqan doono xirfadle leh qaybo 'shouty' halkan iyo halkaas, ka dib oo dhan.
Cod Dheeraad ah / Qaamuus
Hufnaan waa lagama maarmaan nooc kasta oo cod ah, maxaa yeelay dhagaystuhu wuxuu u baahan yahay inuu fahmo eray walba - haddii aysan ereyada oo dhami muhiim u ahayn gaadhsiinta farriinta, kuma ay jiri lahaayeen qoraalka. Farqiga udhaxeeya maqalka hadalka kudhaqanka codka iyo jilitaanka jirka waa iska cadahay in dhagaystayaashu aysan arki karin aflaamta codka afkiisa oo dhaqaaqaya, taas oo qayb ka ah sida aan u fahmayno hadalka, sidaa darteed howshu waa inay noqotaa mid gebi ahaanba laga dhawaajiyo.
Si fudud loo fahmo inta wada hadalka harsan yahay runtii waa xirfad, iyo sayniska codadka fannaaniintu si gaar ah ugu xeel dheer yihiin. Si dhakhso leh u hadal oo qaar ka mid ah caddayntii ayaa luntay, laakiin ka-hadal badan iyo hadalka ayaa gaabis ah.
Sidaad u aragto, qaybaha kala duwan ee codka farsamada inta badan way isqabaan, cilmigana kuwada habo dhammaantood sheeko-yaqaan dhawaq-xirfadeed leh ayaa noqon kara khiyaano. Sax u hel, in kastoo, iyo awoodda codka kor ku xusan waxay runtii saameyn ku yeelan doontaa gudbinta farriintaada!
Tags: qaafiyaddaHufnaanqaamuuswax soo saarka mccoymidabcodka codkacod korcod dheermugga
Sep 6, 2016 at 10: 40 AM
Oh great .. waxaan halkan ka helay aqoon weyn oo ku saabsan sayniska codka .. Sababtoo ah waxaan jeclahay codka jilaayaasha waxaanan la socdaa caruurnimadaydii .. Waa hamidayda ah inaan uruuriyo aqoonta ku saabsan codka .. Waxaan doonayaa noqo cod caan ah jilaaga .. Waad ku mahadsantahay wadaagida macluumaadkan weyn ..